Dingana Ataon’ny Fitondrana Shinoa Mba Hanalàna Baràka Ilay Mpikatroka Ho An’ny Zon’ny Olom-Pirenena Voafonja · Global Voices teny Malagasy
Dingana Ataon'ny Fitondrana Shinoa Mba Hanalàna Baràka Ilay Mpikatroka Ho An’ny Zon’ny Olom-Pirenena Voafonja
Voadika ny 22 Jona 2015 18:50 GMT
Sary avy amin'ny mpanao sariitatra ara-politika @badiucao. Jereo ao anatin'ny lahatsoratra ny sary feno.
Nosamborina ny 19 May i Wu Gan, mpikatroka malaza momba ny zon’ny olom-pirenena, noho ny fihetsiketsehana nataony teo ivelan’ny fitsarana tany amin’ny faritanin’i Jianxi, izay toerana nivorian’ ny mpisolovava nitaky ny antontan-taratasy momba ny raharaha iray taloha izay tian’izy ireo hosokafana indray. Ny 27 May, nafindra tany Fujian i Wu hotànana am-ponja noho ny heloka bevava sy fiampangàna azy noho ny “nitarika fifandirana sy niteraka korontana” ary koa fanalàm-baràka.
Ny fisamborana sy ny fitanana am-ponja azy – ary ny fandrakofam-baovao nataon'ny mediam-panjakana naterany izay nanaratsy endrika an’i Wu – dia nitarika tahotra ny amin'ny hisian’ny hery famoretana hoavy hanjo ireo mpikatroka momba ny zon’ny olom-pirenena ao Shina.
Na eo aza ny tsy fisian’ny fifandraisana mafy orina aminà vondron’ny olom-pirenena manokana na sehatra ety anaty tranonkala, lasa fanta-daza amin’ny faribolan’ny zon’olombelona any Shina i Wu nanomboka ny taona 2009. Misalotra ny anaram-bositra “Butcher” ilay ranamana 42 taona. Nanazava i Ge Wenxiu, mpisolovava an’i Wu, raha niteny tao amin’ny Biloagy Sinosphere an'ny New York Times, fa ny anarana dia natao hanesoana ny fampiasàn’ireo manampahefam-panjakana fomba ratsy miaraka amin’ny soso-kevitra feno eso fa tiany “hovonoina” izy ireo noho ny kolikoly sy ny fitondrantena ratsiny.
Nandritry ny andro vitsy lasa, nandrakotra ny fisamborana an’i Wu ny media fehezin’ny fanjakana, miaraka amin’ny fitongilanana tanteraka amin’ny fanamelohana azy. Ny 25 May, nampiasa sary avy amin’ny fakantsarin’ny fiarovana teo ivelan’ny Fitsarana Avom-Bahoaka tao Jiangxi ny China Central Television (CCTV) ho porofon'ny fitondrantena mikorontana nataon’i Wu. Telo andro taty aoriana, nasehon'ny People's Daily, gazety mpiseho isan’andro an’ny antoko kaominista ho toy ny nisara-bady tsy tomponandraikitra, mpankorontana sy mpisoloky i Wu ary mpanao heloka bevava koa ny rainy sy ny rahalahiny. Nanondro olom-pantatr'i Wu tsy voatonona anarana ilay tatitra, ka mihevitra fa ny hafanàm-po ara-tsosialy ataony dia nentanin’ny tombontsoa manokana.
Wu dia tao anatin'ny vondrona voalohan'ireo mpampiasa aterineto mba hanohitra ny fanadihadihana nampiady hevitra nataon’ny pôlisy tamin’i Deng Yujiao, mpandroso sakafo izay nanindrona antsy sy nahafaty manampahefana tao amin’ny governemanta taorian'ny saika hanereny azy hanao firaisana taminy. Wu aza dia nandeha mihitsy niala tao Beijing nankany Hubei mba hamangy an’i Deng ary handresy lahatra ny fianakaviany hitady vonjy amin‘ny mpisolovava avy ao Beijng mba hampiakatra fitsarana ambony. Tamin’ny farany, voampanga ho nanao “fiarovan-tena ara-dalàna be loatra” i Deng, nefa afa-niala tamin’ny sazy heloka be vava noho ny sàtany ara-tsaina. Noheverina ho toy ny fahombiazana lehibe ho an’ny hafanàm-po amin’ny tranonkala any Shina iny raharaha iny.
Nanomboka tamin’izay, nanohy nanampy ny olon-tsotra amin’ny fiarovana ny zony i Wu. Vao haingana izy no tafiditra tamin’ny raharaha fitifirana nahafaty lehilahy iray nataon’ny pôlisy tao amin’ny fiantsonam-piarandalamby tao Qing’an. Namorona ekipan’olom-pirenena mpanao fanadihadiana izy ary nitaky ny hamoahan’ny polisin’ny lalamby ny horonantsary tamin’ny fakantsary fanaraha-maso ao amin’ilay fiantsonana mba ho hitam-bahoaka.
Toy ny nanampian’i Wu Gan ireo maro mpanao fitarainana mba hanajàna ny zon’izy ireo, nisy olona sasany naneho hevitra mba hanohanana azy tamin’ny alalan’ny sehatra samihafa amin’ny media ara-tsosialy. Satria voasivana mafy ny Weibo ilay toy ny Twitter shinoa dia tamin’ny Twitter ny olona sasany no nandefa hafatra. Badiucao, mpanao sariitatra ara-politika, naneho ny fanohanany tamin’ny alalan’ny sary nataony:
Tantara an-tsary momba ny “Butcher tao amin’ny CCTV”: ny tongotr’i Butcher iray mankany amin’ny trangam-pitifirana tao Qing’an, ary ny tongony ilany voatazon’ny Antoko avy hatrany: tsy vitan’ny hoe nosamboriny izy, fa nasehony tao amin’ny fahitalavitra koa. “Ilay mpivaro-kena miavaka sady ratsy toetra [anaran’i Wu Ganny ety anaty efijerin'ny media sosialy ] dia novonoin’ny mpivaro-kena be voninahitra. Tena mihoatra noho ny mampihomehy ny nofin’i Shina. Maneho ny fanohanako an’Atoa Butcher ity sary ity.
Maro ny mpampiasa tambajotra no tohina tamin’ny fanovàna ny marina nataon’ny media mikasika ny fiainan’i Wu manokana. Nilaza i Liushui fa ampahan’ny ezaka fampielezan-kevitra efa voarindra ny fanalàm-baraka ataon'ireo famoaham-baovao :
Voalohany izao no nahitako mpitondra mampiasa fahefam-panjakana maro, anisan’izany ny CCTV, Xinhua ary ny Gazety miseho isan’andron’i Shina [eo ambany fibaikoan’ny mpitondra isan-karazany ireo media telo ireo: ny antoko kaominista, ny governemanta ary ny manampahefana momba ny fampielezan-kevitra] mba hamorona tantara hamelezana ilay mpikatroky ny zo ifotony “Boucher Wu Gan”. Tsy nahazo izany karazana famelezana izany, na i Liu Xiaobo [gadra politika] tamin’ny fotoan’androny aza. Matetika ny fanjakana tsy refesi-mandidy no mampiasa ny media mba hamaizana ny olona amin'ny fomba tsy vitan'ny lalàna atao. Hovainy ho mainty ny fotsy ary haratsiany ny fitsaràna. Fitaovana iray ho entina manatsara fiarahamonina ny hetsika fikatrohana ho an'ny zo. Tokony hànana olona maromaro toa an'i Wu Gan isika.
Nino i Wen Yunchao, shinoa mpanohitra mipetraka any Etazonia, fa tafiditra amin'io ireo manampahefana ao amin’ny fiarovam-pirenena:
Raha tsaraina avy amin’ny fitànana am-ponja nohon’ny heloka bevava i Butcher, ny tatitra maika sy voarindra nataon’ny Xinhua, ny People's Daily sy ny CCTV, ary ny fandrindrana iraisam-paritany teo amin’ny faritanin’I Jiangxi sy ny faritanin’I Fujian tamin'ny nihazonana an’i Wu Gan hotànana am-ponja nohon’ny heloka bevava, ny komitin’ny Fiarovam-Pirenena ihany no afaka manetsika miaraka ny fahefam-pitsaràna sy ny fahefam-pampielezan-kevitra. Azo antoka fa misy zavatra mampiahiahy mitranga eto. Mikendry ny hampihorohoro sy hanafoana ny mpikatroka mafana fo mpiaro ny zon’ny olom-pirenena izany famoretana Izany. Ny fampielezan-kevitra amin’ny fanondroana olona iray miaraka amin’ny fikasana ny hamono azy dia sahala amin’ny miady amin’ny [mpitily miafina] mpampihorohoro, manafintohina [ny famoretana tahàka zany].
Nino ny mpampiasa Twitter, Beidaijin, fa tsy hifarana amin’ny tranga iray io famoretana farany io:
Midika ny fanentanana ataon’ny antokom-panjakana amin’ireo sampana telon’ny media fa tsy mijanona eo amin’i Butcher ny tanjon’izy ireo. Sehatra fanokafana fotsiny iny ary mbola betsaka ny fampisehoana hanaraka eo. Ampahany/famantarana ny sokajin’ny “hetsika” [izay tian’ny fitondrana ho potehina] i Butcher, toy ny fampidirana ihany izy ary mbola hisy betsaka no havahana ho lasibatra.
Nisy mpampiasa serasera vitsivitsy nanohana ny tsy fivadihan’i Wu:
Nihezaka mafy ny hanaratsy an’i Butcher ny Xinhua mba hanasazy ireo mafana fo mpiaro zo. Toy ny “andian'olona” mitarika korontana no famaritany ny mpiaro ny zo sivily. Tsara, tia manaraka tranga mafàna i Butcher. Nihaona tamiko matetika izy nanomboka ny taona 2009. Matetika izy no tafiditra amin’ny hetsika momba ny zo sivily. Tena basivava izay izy. Nanontany ahy izy mikasika ny satam-pianakavian’i Chen Yunfei [nosamborina tamin’ny fiandohan’ny volana May i Chen nohon’ny “fandrisihana hanongam-panjakana” sy “fitarihana korontana”]. Te-hanome sy hanampy ny fianakaviany izy.
Ankehitriny, ny olona ratsy fanahy no mitantana ary ny olona tsara fanahy no any am-ponja. Anisan’ny voalohany zatra nampiasa ny Weibo aho ary efa niala tamin'ilay sehatra. Niteny nitondra ny feon'ireo niharam-boina i Butcher. Voaroaka tao amin’ny Sina Weibo izy noho i Xu Chunhe [ilay niharam-boina tamin’ny tifitra nataon’ny pôlisy tao Quing’an]. Voasambotra izy ankehitriny. Vavolombelona tamin’ny zavatra nataony nandritra izay taona vitsy farany izay aho. Olona tena mahitsy i Wu izay manana fandàvan-tena matanjaka ary afaka mampiaka-peo!